Booliska Ingiriiska Oo Soo Badbaadiyay Oday 40 Sano Ku Jiray Addoonsi Casri Ah – Beegsonews-Wararka maanta
Home XOGAHA DUNIDA Booliska Ingiriiska Oo Soo Badbaadiyay Oday 40 Sano Ku Jiray Addoonsi Casri...
Booliska Ingiriiska Oo Soo Badbaadiyay Oday 40 Sano Ku Jiray Addoonsi Casri Ah
Shaqaale dowladeed oo ku dhaqan gudaha Ingiriiska ayay u suuragashay iney heleen oday weli nool oo 40 sano ku qaatay aqal yar oo hal mitir ah, iyagoo xabsigiisan u aaneyay inuu ku jiray «adoonsi casir ah».
Sida ay qortay jariidada Daily Mail ee dalka Ingiriiska ka soo baxda, weli qofkani cidda uu yahay lama garanayo, waxa uu muddo 40 sano ah ku qaatay aqal yar, iyadoo aqalkan uu ku jiray mudada afartanka sanno ah aanuu dhirirkiisu ka badneyn 1.8 mitir.
Waxa uu u gacan galay addoonsi casri ah
Odaygan ay shaqaaluhu soo badbaadiyeen, ayaa waxa uu jiraa hadda 58 sano, waxaana uu qolkaa yar uu galay markii uu 18-jir ahaa, aqalkan yar ayaa ku yaalla deegaanka Carlisleee u dhow magaalada Cambria Waqooyi Galbeedka dalka Ingiriiska.
Danbi baarayaasha dhacdadan gacanta loo geliyay, ayaa waxey howshooda ka bilaabeen iney ogaadaan sida ay wax u dhaceen, halka odaygii isla markiiba loo qaaday isbitaal goobta ka ag-dhawaa oo takhasusi ah si gurmad caafimaad uu u helo, jir ahaan iyo nafsi ahaan labadaba.
Dhacdadan ayaa loo qabtay oday kale oo 79 jir ah oo lagu tuhunsan yahay inuu ninkan addoonsanayay 40 kii sano ee la soo dhaafay.
Sawirrada laga qaaday ayaa muujinaya in qofkan yar ee midabka cagaarka ah leh ay taallay sariir dhammaad ah, kursi bir ah iyo telefishin, dhulkana uu gogolnaa roog googo’ay oo ku fidsanaa.
Dadka baraha bulshada isticmaala ayaa dhacdadan si weyn ula falgalay, waxey ku tilmaameen iney tahay dhacdo la mid ah qisadii lagu matalay filmikii (Room), filmikaas oo gabar 7 sano jir ah, ilma yar ayay ku dhaleysa gudaha qol yar oo lagu soo qafaashay, kadibna uu ilmaheeda yar marka dambe ka badbaadinayo dhibaatadii ay ku sugneyd.
Previous articleIndonesia: Magaalooyin Loo Bedelaayo Xabaallo (Qubuurro)
Next article4 waxyaabood oo cusub oo lagu arkay weeraarkii lagu qaaday Maka Al-Mukarama